Downloads 8 136
Mpanoratra: Daniel da Silva & Denis da Silva & Johan Peeters
Aerobatic sy ny fampiofanana fiaramanidina. Very mamirapiratra ary tena mafy. Zavatra tsy add-eo no tonga lafatra ho an'ny Multiplayer. Aza manaiky ho voafitaka araka ny habeny kely. Ho gaga noho ny manidina toetra io modely. Tsy maintsy manandrana!
Ny Embraer EMB 312 Tucano dia amin'ny fiaramanidina mandritra ny fiofanana ara-miaramila sy ny tany tandem fanafihana nataon'ny mpanamboatra Breziliana Embraer in Sao Jose dos Campos (São Paulo State). Ny anarany miaramila Breziliana: T-27 ho an'ny fampiofanana pirinty, AT-27 noho ny fanafihana tany pirinty.
Ny sidina voalohany natao tao 1980 sy ny fiterahana voalohany tao 1983. Misy Powered by iray Pratt & Whitney PT6 turbine-A25C 750 HP amin'ny lavaka. Ny endri-javatra lehibe indrindra dia ny toerana ambony ny mpampianatra momba ny mpianatra sy ny fanaraha-maso ny karazana entona tahony HOTAS (tanana Throtle ary aza miovaova).
Ny Breziliana Air Force no baiko mihoatra ny 133 vondrona ity vokatra. Manampy ihany koa ny aerobatic fisafoana "Smokey da Esquadrilha" Breziliana mitovy ny Patrouille de France. (Wikipedia)